Home / समाचार / कसरी भयो हिन्दु धर्मको उत्पत्ति ?
कसरी भयो हिन्दु धर्मको उत्पत्ति ? 0
विश्वमा हिन्दू धर्मलाई सबै धर्महरू भन्दा धेरै पुरानो मानिन्छ । पृथ्वीमा मानवको उत्पतिसँगै हिन्दू धर्मको इतिहास जोडिएका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
पहिला चार वेद रचियो, जसमा ऋग्वेद प्रथम थियो । त्यस पछि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद उपनिषद जस्ता ग्रन्थहरू आए । हिन्दु धर्मको उत्पत्ति वैदिक संस्कृतिबाट इशापूर्व २००० वर्षभन्दा पहिला भएको मान्यता छ । हाल विश्वमा हिन्दु धर्म मान्ने मानिसहरु १ खर्ब ५ अर्ब छन् । सो मध्ये ९६ प्रतिशत दक्षिण एशियामा बस्छन् ।